ကြက်ဟင်းခါးသီးဒီလောက်ခါးတာကို သုပ်ရသလားလို့ မအံ့သြသွားပါနဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ရေ့့့ ကြောင်လျာသီးသုပ် အလွမ်းပြေ ကြက်ဟင်းခါးသီးသုပ်လေး လုပ်စားလိုက်ရတာပါနော်။ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ ကြက်ဟင်းခါးသီး၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊နီ၊ မြေပဲလှော်၊ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်၊ ပဲမှုန့်အကျက်မှုန့်၊ ဆား၊ အချိုမှုန့်၊ ဆီချက်တို့ပါနော်။
ကြက်ဟင်းခါးသီးကို ထက်ခြမ်းခွဲ၊ အစေ့ထုတ်ပြီးတော့ မထူမပါးလှီးပြီး ဆားနဲ့ နယ်ဆေးပြီး ပြုတ်ပြီးရေစစ်ထားပါ။ ကြက်သွန်ဖြူနီကို အခွံနွှာ၊ ပါးပါးလှီးပါ။ ကြက်သွန်နီကို လှီးပြီးသားကို ရေဆေးပြီးစစ်ထားပါ။ မြေပဲလှော်နဲ့ ပုဇွန်ခြောက်ကို ကြိတ်ထားပါ။ ဆီချက်ကတော့ အသင့်ရှိပြီးသားမို့ ထပ်ချက်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။
အားလုံးအသင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ ပန်းကန်တစ်ခုထဲကို ကြက်ဟင်းခါးသီးပြုတ်ကို ရေညှစ်ပြီးထည့်၊ ကြက်သွန်ဖြူနီ လှီးထားတာကိုထည့်၊ မြေပဲလှော်နဲ့ ပုဇွန်ခြောက်ထောင်းကိုထည့်၊ ပဲမှုန့်အကျက်မှုန့်ထည့်၊ ဆား၊ အချိုမှုန့်တို့ကို ထည့်ပြီး သေချာနှံ့အောင်နယ်ပါ။ အရသာအပေါ့အငံကိုတော့ ကိုယ်နှစ်သက်သလို မြည်းပြီးရင်တော့ထည့်ပါနော်။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ခါးဆိမ့်သက်အရသာလေးနဲ့ ကြက်ဟင်းခါးသီးသုပ်လေး ရပါပြီ။
Anonymous October 28, 2010 at 4:21 PM
ဒီအသုပ်ကလေး စိတ်ဝင်စားလို့ သုပ်စားမလို့ .. ဖတ်မရဘူး ဖြစ်နေတယ်.. more.. ဆိုတာ ကို နှိပ်လိုက်ရင် တခြားနေရာ ရောက်ရောက် သွားတယ်. အစ်မရယ်.. လင့်လေး ရှိရင် ပေးပါဦးနော်.
yes, me too. i also cant click more.